पातलो वाल उत्पादनको लागि इंजेक्शन मोल्डिंग मेशीन - पातलो पर्खाल उत्पादन आपूर्तिकर्ताका लागि चीन इंजेक्शन मोल्डिंग मेशीन,कारखाना YHYSIONIMM
घर » उत्पादनहरू » प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिनहरू » उच्च गति इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिनहरू » पातलो वाल उत्पादनको लागि इंजेक्शन मोल्डिंग मेशीन
हामी पातलो भित्ता उत्पादनको लागि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिनहरू पनि आपूर्ति गर्दछौं. पातलो भित्ताका लागि यो इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिन विशेष रूपमा कन्टेनरहरू र अन्य प्लास्टिक उत्पादनहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ जसको मोटाई अति ठूलो छैन. एक विशेषज्ञ अनुसन्धान&विकास विभाग हाम्रो कम्पनी मा स्थापित गरिएको छ कि हामी ग्राहकहरु लाई प्राविधिक समाधानको लागि विचारशील सेवाहरु प्रदान गर्न सक्छौं.
उच्च परिशुद्धता एकल सिलिन्डर इंजेक्शन प्रणाली अपनाउने, यो प्लास्टिक ईन्जेक्शन मोल्डिंग मेशीन कम जड़त्व र उच्च प्रतिक्रिया गति संग उच्च गति इंजेक्शनको लागि उपयुक्त छ. यसले पातलो पर्खाल उत्पादनहरू अझ बढी प्रभावकारी रूपमा उत्पादन गर्न सक्दछ. र उत्पादन चक्र समय धेरै छोटो हुन्छ.
परम्परागत मेशीन संग तुलना, हामी ईन्डो मोटर को उपयोग ऊर्जा बचत र एकै साथ स्थिति नियन्त्रण गर्न को लागी अधिक सटीक को लागी गर्छौं. मेशिनले वरिपरि पावर बचाउन सक्छ 30-70%.
पातलो भित्ताका लागि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मेशीन मेकानिकलको साथ आउँदछ, हाइड्रोलिक, विद्युतीय ट्रिपल सुरक्षा. सुरक्षा मोड्युल स्वतन्त्र नियन्त्रणले मेसिन बन्द हुने बखत कुनै गल्ती नभएको सुनिश्चित गर्दछ, इंजेक्शन, चार्ज गर्दै र नोजल अगाडि.
1. प्लास्टाइजिंग प्रणालीको नवीन डिजाइनले कम-तापक्रम इन्जेक्शन प्राप्त गर्दछ; यो मेशिन ऊर्जा बचत र वातावरणीय बनाउँछ. यसको प्लास्टिक उत्पादनहरू उच्च तपियता र कठोरताका साथ छन्.
2. उन्नत हाइड्रोलिक प्रणाली कम दबाव ईन्जेक्शन प्राप्त गर्दछ; यो बनाउँछ प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन अझ राम्रो यांत्रिक सुरक्षा प्राप्त, लामो मोल्ड सेवा जीवन छ, र कम तनाव र विकृति संग उत्पादन निर्माण.
3. अनुकूलित नियन्त्रण प्रणाली छिटो प्रतिक्रिया गति प्राप्त गर्दछ; यसले मेसिनले छोटो समयमा उच्च शट दर प्राप्त गर्दछ (0.3 दोस्रो).
उत्पादन उदाहरण ：
उत्पादन : 1000ml फास्ट फूड कन्टेनर
चक्र समय: 4.5s
मेशिन सुझाव दिनुहोस्: HXM258H
प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मेसिनको अवयव
1. उच्च-शक्ति टगल क्लैम्पले क्ल्याम्पि fasterलाई छिटो बनाउँछ र विकृति कम गर्दछ.
2. हाइड्रोलिक चालित गियर मोल्ड समायोजन उपकरणले मोल्डलाई छिटो र विश्वसनीय रूपमा समायोजित गर्न सक्दछ.
3. मानक हाइड्रोलिक संरक्षण उपकरण प्रदान गरिएको छ.
1. अभिनव एकल सिलिन्डर इंजेक्शन प्लेटफार्म, उच्च गति इंजेक्शनको समयमा आउट-सिnc्क त्रुटिमा विजय हासिल गर्दछ र यसरी इंजेक्शन अधिक विश्वसनीय बनाउँदछ.
2. इंजेक्शन प्लेटफर्मको समर्थन संरचना को लागी उच्च शक्ति डिजाइन लामो समय सुनिश्चित गर्दछ & इंजेक्शन एकाईको स्थिर काम गर्दै.
3. यस प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मेसिनमा, इंजेक्शनको गति पुग्न सक्छ 300 लाई 400 मिमी / से
4. आवश्यक अनुसार विभिन्न स्क्रू / ब्यारेल एकाइहरूको लागि वैकल्पिक.
1. क्लोज-लूप सर्वो कन्ट्रोल हाइड्रोलिक प्रणालीको द्रुत प्रतिक्रियाले हाइड्रोलिक दबावको प्रतिक्रिया समय छोटो बनाउन सक्छ & प्रवाह. बाहेक, दोहोरिने सम्भावनाको उच्च शुद्धता हासिल गर्न सकिन्छ.
2. हाइड्रोलिक सर्किटको अनुकूलित डिजाइनले दबाव र शक्तिको घाटा कम गर्दछ. यसले प्रणालीलाई अझ बढी कार्य गर्दछ.
3. सटीक बाईपास रिसायकल फिल्टरले NAS8 सम्मको तेल प्रभावलाई बीमा गर्दछ.
4. आयातित हाइड्रोलिक भागहरू प्रसिद्ध ब्रान्डबाट आएको हो, जस्तै जर्मनी एकरले / जापानी युकेन / नाची आदि.